News - Bandhigga Qurxinta Caalamiga ee Shiinaha
Bandhigga Caalamiga ah ee Qurxinta Shiinaha (Guangzhou), oo la aasaasay 1989, waxaa horey loogu aqoon jiray Expo Beauty Expo. Bandhigga ganacsiga quruxda adduunka ee caanka ah wuxuu ka kooban yahay quruxda xirfadeed, daryeelka timaha & qaabeynta, is qurxinta, daryeelka shakhsi ahaaneed, iyo silsiladaha kor iyo hoos-ka-bixinta. Tani waa sanadkii 30-aad oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna horreeya qabanqaabiyaasha carwooyinka ganacsiga ganacsiga adduunka. Barmaamijka 'CIBE' wuxuu wali si madax-bannaan ugu shaqeeyaa taageerada dhammaan Xiriirka Shiinaha ee Warshadaha & Dhaqanka Qurxinta Dhaqanka & Qolka Qurxinta. Ku dhowaad soddon sano, himilada CIBE waxay ahayd in lagu nafaqeeyo jawi caafimaad leh oo tartan leh iyo madal ganacsi oo waara oo loogu talagalay warshadaha quruxda badan ee Shiinaha. CIBE waxay taageertaa shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, waxay kobcisaa sumadaha qaranka, waxay caawisaa ganacsiyada qurxinta casriga ah inay koraan oo ay u koraan tartamada caalamiga ah, waxay soo bandhigaan noocyada caalamiga ah suuqa Shiinaha, waxayna awood u siinayaan inay helaan xasaasiyad dhaqameed iyo faham buuxa oo ku saabsan suuqa Shiinaha.
Carwadii ugu waynayd uguna ballaadhnayd ee Shiinaha ka dhacda
Bandhigga quruxda badan ee caalamiga ah ee Shiinaha wuxuu soo ururiyaa alaabada adduunka ugu sareysa, oo daboolaya silsiladda warshadaha oo dhan (Quruxda Xirfadaha, Is qurxinta, Qalabka Ceyrta & Baakadaha, Qalabka Daryeelka Quruxda, Mashiinka Daryeelka Maqaarka, Qalabka Daaweynta Daryeelka Maqaarka, Cosmetology Caafimaadka) .
Kani waa bandhig qurux badan oo xirfadeed, MEICET ayaa kaqeyb gala sanad walba.
Maxay kaga duwan tahay sanadihii hore waa in sanadka 2020, Meicet ay keento alaabtii ugu dambeysay --------Falanqeeyaha Sawirka ISEMECO Maqaarka.
ISEMECO Sawirka Maqaarka Sawirku waa qalabkii ugu horreeyay ee Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka Maqaarka ee Isbitaalka maqaarka iyo Isbitaalka qurxinta.
2020 Shiinaha (GuangZhou) Bandhigga Quruxda Caalamiga ah.
Waqtiga: Sebtember 4 ilaa Sebtember 6th, 2020.
Waab: 11.3 / B49